ओली-प्रचण्ड Archives - Lokpati.com
Tag - ओली-प्रचण्ड
ओली–प्रचण्डबीच भेटघाट, सभामूखमा जुट्ला त सहमति ?
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नयाँ सभामूख चयनका लागि छलफलमा जुटेका छन्। उनीहरुबीच अहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल चलिरहेको प्रचण्डका प्रेस संयोजक...
ओली-प्रचण्ड विदेश जाँदै : के-के छन् कार्यक्रम ?
काठमाडौं, १४ साउन। प्रमूख विभागहरुको जिम्मेवारी टुंग्याउन सकस भइरहेको अवस्थामा नेकपाका अध्यक्षद्वय बाँकी काम थाती राख्दै विदेश भ्रमणमा जाने भएका छन्। नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष...
टुंगियो नेकपाको एकता : के-के छन् निर्णय ?
काठमाडौं, असार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता प्रक्रिया टुंगिएको छ। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका अनुसार एकता प्रक्रियाको सम्पूर्ण गृहकार्य सम्पन्न भएको हो।
‘एकताको गृहकार्य हार्दिकताका साथ सम्पन्न भएको छ’...
ओली-प्रचण्ड छलफल सकियो, के भयो निर्णय ?
काठमाडौं, ४ असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदेश भ्रमणलगायतका व्यस्तताका कारण पटक–पटक स्थगित हुंदै आएको सचिवालय बैठक शुक्रबार बस्न...
नेकपा संसदीय दलको बैठक : सरकार पुनर्गठनबारे छलफल होला ?
काठमाडौं, १७ वैशाख। मंगलबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको बैठक शुरु भएको छ।संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पमकल दाहालले सम्बोधन गर्ने छन्।
संसदीय दलको बैठकमा...